Uzifumana njani iinyanga zasimahla zoMculo weApple ngeShazam | Iindaba ze-iPhone
Uzifumana njani iinyanga zasimahla zoMculo weApple ngeShazam
Ingelosi Gonzalez | | Apple Music, Izaziso
IKrisimesi nayo iyafika izicelo ukusuka eApple. Rhoqo ngonyaka iApple Music ibonelela ngeenyanga zobhaliso lwasimahla ngokusebenzisa intsebenziswano ye-Shazam app. Olu nyuso luvumela abasebenzisi ukuba bathenge iinyanga zasimahla "njengesilingo" okanye "imbuyekezo" ngokusebenzisa i-app yokuqaphela umculo. Oku akuyeki ukuba indlela yokukhuthaza ukusetyenziswa kwezi nkonzo zombini ngenjongo yokwandisa ababhalisile be-Apple Music emva kokuba ixesha lovavanyo liphelile. Ukuya kwiinyanga ezintlanu simahla inokufezekiswa ngokusekelwe ekuthatheni inxaxheba kunyuselo lwangaphambili
1 Indlela yokufumana iinyanga zasimahla zoMculo weApple kwiShazam
2 Ubudlelwane benziwe phakathi kwezi nkonzo zombini
Indlela yokufumana iinyanga zasimahla zoMculo weApple kwiShazam
Eyona ndlela ilula yokufikelela kwintengiso ukukhuphela usetyenziso lweShazam kwi-terminal yethu. Ukwenza njalo, cofa nje koku kulandelayo unxibelelwano, okanye ucofe i icon ye-app emazantsi eli nqaku. Nje ukuba sikhuphe usetyenziso, siza kubona isibhengezo esitsha apho uya kubona: «Ixesha elilinganiselweyo. Ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-5 zoMculo weApple simahla ».
Nje ukuba singene, uShazam uya kuhlalutya iakhawunti yethu ye-ID ye-Apple ukuze aqokelele ulwazi malunga nembali yethu kuMculo weApple. Oko kukuthi, ukuba sithe sathenga ukubhaliswa, zingaphi ukukhushulwa kolu hlobo esiye sajoyina, njl. Ngaloo ndlela singaya kwiinyanga ezimbini simahla, kwimeko yokuzama inkonzo ngezinye izihlandlo, de iinyanga ezintlanu simahla ukuba asikhange sizame isixhobo.
Ukuba ukufikelela kwisicelo asikwazi ukubona ibhanile: ungakhathazeki. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokukhetha. Enye yazo kukucofa oku kulandelayo unxibelelwano okanye ubambe i-QR yomfanekiso okhokela le nxalenye yenqaku. Ngelo xesha, i-app ye-Shazam iya kuvula kwaye siya kufikelela kwi-promotion ngendlela efanayo ngokucofa isibhengezo esibandakanyiweyo ngaphakathi kwesicelo ngokwayo.
Ukuba sicinezela ku «fumana» ukunyuswa kuya kuba Usetyenziso loMculo lweApple luya kuvula kwaye isishwankathelo sesiphumo sonikezelo lwethu siya kuboniswa. Emazantsi ubona umzekelo wam. Kwimeko yam, ndandisele ndifikelele kwi-promotion efanayo ngoko ke ndinikwa ixesha lovavanyo iinyanga ezimbini simahla emva koko i-9,99 euros iya kuqala ukuhlawulwa, umrhumo wenyanga wenguqulo eqhelekileyo ye-Apple Music.
Kwabo basebenzisi sele bebhalisele ukusebenza kwi-Apple Music, banokuqhuba inkqubo efanayo kwaye iinyanga ezihambelanayo zentlawulo yabo yenkonzo ziya kuncitshiswa. Oko kukuthi, baya kuba neenyanga ezimbini ngaphandle kokuhlawuliswa imali ukuze bayiguqule ibe "isipho" seKrisimesi. Kuya kufuneka ulumke ukuba ufuna ukuthatha ithuba lokunyuselwa ukususela ngoku Emva kokuphela kwexesha "lovavanyo", intlawulo iya kuhlawulwa ngokuzenzekelayo. Ukuba ufuna ukonwabela ukunyuswa, ndingacebisa ukuseta iintsuku ze-alam ngaphambi kokuba intlawulo yenziwe ukuze urhoxise ukunyusa.
Ubudlelwane benziwe phakathi kwezi nkonzo zombini
UShazam uchonga nayiphi na ingoma ngemizuzwana. Fumanisa amagcisa, iingoma, iividiyo kunye nohlu lwadlalwayo, konke simahla. Ngaphezulu kwe-XNUMX yezigidigidi yofakelo ukuza kuthi ga ngoku.
I-Shazam sesinye sezona zicelo zisetyenziswa kakhulu ukubona umculo ngokuthe ngqo. Inkqubo ilula njengokuvumela usetyenziso ukuba "lumamele" imizuzwana embalwa ukufikelela kwigama, igcisa kunye necwecwe lengoma esiyimameleyo. Ukongeza, ukuhlanganiswa kwengoma kunye namaqonga omculo wokusasaza avunyelwe ukuba akwazi ukufikelela kuwo ngokulula.
Ukulandela ukuthengwa kuka-Apple kweShazam kwiminyaka embalwa eyadlulayo, isici sadityaniswa iOS. Okokuqala ngomyalelo kwiSiri. Emva koko, kwavunyelwa ukufika kwendlela emfutshane kwindima yeShazam ngeZiko loLawulo. Ngale ndlela, ukufikelela kwinkonzo kulula njengokutsala uSiri okanye ukuswayipha ukufikelela kwiziko lolawulo.
Ungawavula njani amakhonkco eSpotify kwiApple Music (kunye nangenye indlela) ngeMusicMatch
Umculo weApple yinkonzo yokusasaza ekuvumela ukuba umamele iingoma ezingaphezu kwezigidi ezingama-90. Ngokungathi oko akwanelanga, unokukhuphela iingoma kwaye umamele ngaphandle kweintanethi, ulandele amazwi eengoma ngexesha langempela, dlala umculo kuzo zonke izixhobo zakho, fumana iindaba ngokokuthanda kwakho kwaye ulahleke kuluhlu olukhethwe ngabahleli bethu, phakathi kwezinye izinto. Kwaye ukwanawo umxholo wokuqala kunye nowodwa.
Umculo weApple nguyena inkonzo yokusasaza umculo yeapile enkulu. Phantse Izigidi ezingama-70 zababhalisi abasebenzayo kusekude kwi-165 yezigidi ezingaphezulu kwe-Spotify enabasebenzisi abangaphezu kwe-360 yezigidi ezisebenzayo. Kodwa nangona kunjalo, abasebenzisi abahlala kwiApple Music banyaniseke ngakumbi eqongeni kwaye basebenzise olu hlobo lonikezelo ukuba Shazam kunye Apple zenza zifumaneke kubasebenzisi ngezihlandlo ezikhethekileyo njengokufika kweKrisimesi. Ezi ntlobo zamalinge zinokufezekiswa zinzisa imvakalelo yokuba ngowe-Apple Music yabasebenzisi ababhalisileyo kunye nokubangela inkxalabo kwabo bathandabuzayo ukuba bahlawule umrhumo okanye hayi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Uzifumana njani iinyanga zasimahla zoMculo weApple ngeShazam
yenzayo Iinyanga ze6
Hayi kwipeyinti. Bendihlala nditsaleleka kumxholo weevidiyo kunye namazwi, kodwa andiwufumani nomculo omtsha kwaye ngaphezulu kwawo wonke, "uwenza kwakhona" ilayibrari yam yomculo yonke. Okanye kunoko, "ndiyikrazule". Yonke into ebendinayo kwi-iTunes iphelela ekutshintsheni ikhava, ndingamazi uSiri, okanye ukungandivumeli ukuba ndimamele / ndiyikhuphele kwifowuni yam.
Isiphithiphithi esingenangqondo. Ndikhetha inkonzo engayi kudliwa ngabantu kwithala leencwadi lomculo endilikhathalele iminyaka.
Kuphela kubarhumo abatsha ...
Ukuba sele uhlawula (njengemeko yam) ayisebenzi.
I-iPhone 14 Pro kunye nePro Max ayizukongeza inotshi
Ezinye iiwotshi ze-Apple zinemiba yokutshaja emva kokuhlaziya i-watchOS 8.3